Dutchtown Summer Vibes 2022 • DutchtownSTL.org • Dutchtown၊ St. Louis, MO
အပေါ် Posted ဇွန်လ 18th, 2022
Dutchtown Summer Vibes ပြန်ရောက်ပါပြီ။ တိုက်ရိုက်ဂီတ၊ အစားအသောက်နှင့် သောက်စရာ၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ ကလေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ ရပ်ရွာအရင်းအမြစ်များနှင့် အခြားအရာများအတွက် ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ စနေနေ့၊ Downtown Dutchtown တွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလိုက်ပါ။
Summer Vibes သည် Michigan Avenue မှ Louisiana Avenue မှ Meramec လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ သမိုင်းဝင် Downtown Dutchtown စီးပွားရေးရပ်ကွက်ရှိ လမ်းဘေးပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တေးဂီတအချို့ကို မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် အစားအသောက်ရောင်းချသူများထံမှ မြည်းစမ်းကြည့်ရန် ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင်များနှင့် လမ်းဘေးရှိ ပေါ့ပ်အပ်များဖြင့် စျေးဝယ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီး နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ဤစာမျက်နှာကို အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ပါမည်။ သင့်ဘရောက်ဆာကိုညွှန်ပါ။ dutchtownstl.org/vibes ရက်စွဲအထိစောင့်ရှောက်ရန်။
သင်လာမည်ကို အသိပေးပြီး သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် မျှဝေပါ။ Facebook အဖြစ်အပျက်စာမျက်နှာ.
နွေရာသီ။ ကလေးများအတွက် မှိုတက်နေသော တဲတစ်လုံး၊ ရေနှင့် အအေးခံစရာများ ရှိပါမည်။ Dutchtown Summer Vibes အအေးပေးစက်သည် ကမကထပြုသည်။ အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှု နှင့် စိန့်လူးဝစ်၏ လေလွင့် ကယ်ဆယ်ရေး.
Dutchtown မှာ တစ်နေ့တာလုံး သွားလာနေဖို့ အစားအသောက်တွေ ရှိတယ်။ အစားအသောက်မျိုးစုံအတွက် Urban Eats Neighborhood Food Hall သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါ—အားလုံးလိပ်ပြီးပါပြီ, Crepes နှင့် Treats, Sugoi ဆူရှီနှင့် Tacos la Jefa. ကျွန်ုပ်တို့အပါအဝင် အခြားနေရာများတွင် အစားအသောက်ရောင်းချသူများလည်း ရှိပါမည်။ Munch Wagon. ပြီးတော့ ငါတို့ဆီက အချိုရည်တွေ ရှိတယ်။ Earthbound ဘီယာ!
Neighborhood Innovation Center ရှိစင်မြင့်သည် တိုက်ရိုက်ဒေသခံတေးဂီတများဖြင့် လှုပ်ခတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါအနုပညာရှင်များကို Dutchtown Summer Vibes တွင်ပြသရန်စီစဉ်ထားသည်။
ဆာ Eddie C
Stewie Chops များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Sponsors များကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown Summer Vibes Premier Sponsors များကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Crawford-Butz အာမခံအေဂျင်စီ နှင့် လူ့ဇာတိခံစကားလုံးဖောင်ဒေးရှင်း!
Cure Violence Dutchtown မှ စပွန်ဆာများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်, Earthbound ဘီယာ, အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှု, Times Tattoo ၏ သင်္ကေတ, စိန့်လူးဝစ်၏ လေလွင့် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် Dutchtown ၏ U-Haul ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း.
အောက်မှာ Filed Dutchtown ဖြစ်ရပ်များ. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဒိန်းမတ်, Dutchtown CID, Dutchtown ဖြစ်ရပ်များနှင့် Dutchtown ပင်မလမ်းများ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဇွန်လ 24th, 2022 .
ဒိန်းမတ် Dutchtown ဖြစ်ရပ်များ Dutchtown Summer Vibes 2022